10 ရထားနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိကောင်းစရာ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား > 10 ရထားနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိကောင်းစရာ
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 22/01/2021)
ရိုးရာနှင့်ခေတ်သစ်, တည်ငြိမ်အေးဆေးစွာနှင့် hectic, တရုတ်သည်စူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးနိုင်ငံများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်, အထူးသဖြင့်ရထားနဲ့. တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရန်စီစဉ်ခြင်းသည်အလွန်ကြီးမားနိုင်သည်, အကျွန်ုပ်တို့သည်စုဝေးပါပြီ၊ 10 ရထားနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာအကြံဥာဏ်များ.
ထုပ်ပိုးမှစ။ ရထားလက်မှတ်ကြိုတင်ဘွတ်ကင်, ဤ 10 ရထားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသို့သွားရန်အကြံပေးချက်များ, မည်သည့်ရှုပ်ထွေးမှုများ sort ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အများဆုံးမော်ကွန်းစွန့်စားမှုသေချာ.
1. ရထားနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိကောင်းစရာ: သင်၏သုတေသနလုပ်ပါ
တရုတ်၌, သငျသညျရှိရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်2ရထားအမျိုးအစားများ: မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်ရိုးရာရထားများ. သင်၏သုတေသနကိုကြိုတင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်, သင့်အတွက်ဘာအကောင်းဆုံးဖြစ်သလဲဆိုတာကိုနားလည်ရန် ခရီးသွားဘတ်ဂျက်, ခရီးစဉ်အမျိုးအစား, ရှည်ကြာခြင်း, နှင့်အဆင်ပြေအဆင့်ကို. ၎င်းသည်အထူးအရေးကြီးသည် ကလေးတွေနှင့်အတူခရီးသွားလာ.
တရုတ်ရထားများ - မြန်နှုန်းမြင့်ရထားများဖြစ်သောဂျီ, : D, သို့မဟုတ် C, ၏ထိပ်မြန်နှုန်းမှာအပြေး 350 km / h. စီးပွားရေး / VIP သို့မဟုတ်ပထမတန်းစားထိုင်ခုံများတပ်ဆင်ထားသည်.
ရိုးရာရထားကို L ဟုအမည်ပေးထားသည်, လူကြိုက်များသူတွေကို K, နှင့်ခက်ခဲထိုင်ခုံကိုဆက်ကပ်, ခက်ခဲတဲ့သို့မဟုတ်ပျော့ပျောင်းအိပ်ပျော်, နှင့် Deluxe ပျော့အိပ်ပျော်နေသော. မှာခရီးသွားလာ 160 ကီလိုမီတာ ဇသူတို့စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ကြသည်.
2. ရထားနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိကောင်းစရာ: မှန်ကန်သောရထားသင်တန်းကိုဘွတ်ကင်လုပ်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံတွင်ရထားများမှာအတန်း ၄ တန်းရှိသည်: ခက်ခဲသောထိုင်ခုံ, ပျော့ပျောင်းသောထိုင်ခုံ, အိပ်မောကျတယ်, ပျော့ပျောင်းအိပ်ပျော်.
ခက်ခဲသောထိုင်ခုံ: ဒီဟာကစျေးအသက်သာဆုံးရထားပါ, များသောအားဖြင့်ရှိပါတယ်5အတန်းနှုန်းထိုင်ခုံ. ဒါကြောင့်, သင်တစ် ဦး ဘတ်ဂျက်အပေါ်ခရီးသွားလာလျှင်, ဤသည်လူကြိုက်အများဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သည်, ဒါပေမယ့်တရုတ်တွေကြားထဲမှာအသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားပါ. ထိုကွောငျ့, သငျသညျအလွန်ဆူညံခြင်းနှင့်လူစည်ကားအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မယ် ရထားခရီးစဉ်.
ပျော့ပျောင်းသောအိပ်စက်ခြင်း: နည်းနည်းပျော့ပြောင်းပြီးပိုမြင့်တဲ့ရထားလက်မှတ်နှုန်းထားနှင့်အတူဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအဆင်ပြေ.
ခက်ခဲအိပ်ပျော်:6အိပ်ယာ, နှင့်အခြားအခန်းများမှ privacy သို့မဟုတ်အထီးကျန်မှုအတွက်တံခါးမရှိ.
ပျော့ပျောင်းသောအိပ်စက်ခြင်း: တရုတ်ရထားများပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးမီးရထားအတန်းအစား, ထိုရှည်လျားသောအကွာအဝေးရထားခရီးစဉ်များအတွက်အထူးအကြံပြုခဲ့သည်. ဒါဟာစျေးအကြီးဆုံး option ပါပဲ, ဒါပေမယ့်သင်ကအထီးကျန်ခန်းထဲမှာပါလိမ့်မယ်, ၏4အိပ်တယ်, နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါဝါခြေစွပ်နှင့်အတူ. သင်ကခရီးသွားစုံတွဲတစ်တွဲဆိုရင်, သို့ဖြစ်လျှင် Deluxe သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်လိမ့်မည်.
3. ကြိုတင်၍ ရထားဘူတာသို့ရောက်ရှိပါ
တရုတ်နိုင်ငံ၏အလုပ်အများဆုံးရထားဘူတာများမှာအကြီးဆုံးဖြစ်သည်, ဖရိုဖရဲ, နှင့်အိတ် x-Ray လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်. ထိုကွောငျ့, သင်အနည်းဆုံးရောက်သင့်သည် 40 သင့်ရထားထွက်ခွာချိန်မတိုင်မီမိနစ်ပိုင်း. ဒီလမ်း, သင်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်ရန်လုံလောက်သောအချိန်ရှိသည်လိမ့်မယ်, လုံခြုံရေးစစ်ဆေးမှု, ရထားပလက်ဖောင်းကိုရှာပါ.
ဘုတ်ပေါ်မှအစားအစာများနှင့်သောက်စရာများသည် ပို၍ စျေးကြီးနိုင်သည်, မွို့၌ဝယ်ယူသည့်အခါထက်. ဒါကြောင့်, သငျသညျပိုကောင်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ချင်ပါတယ်, အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများကိုကြိုတင်ဝယ်ယူပါ, ရထားရှိရိက္ခာပုလင်းများမှစျေးအလွန်ကြီးသောမုန်ညင်းများကိုမဝယ်ပါနှင့်. လတ်ဆတ်တဲ့အသီး, အသားညှပ်ပေါင်, နှင့်ပင် KFC တရုတ်ရဲ့ပေါ်တွင်သင်၏ရထားခရီးစဉ်များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောမုန်ဖြစ်ကြသည် မြန်နှုန်းမြင့်ရထား.
5. ရထားနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိကောင်းစရာ: သင့်အိမ်သာအိတ်ကိုကောင်းစွာထုပ်ပါ
တရုတ်နိုင်ငံတွင်မြန်နှုန်းမြင့်နှင့်ကျည်ဆန်ရထားများတပ်ဆင်ထားသည်မှာခေတ်မီသည်. ရထားတိုင်းတွင်ထိုင်ခုံနှင့်ခေတ်သစ်ရေချိုးခန်းများကိုသင်တွေ့ကောင်းတွေ့လိမ့်မည်. သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အိမ်သာစက္ကူထုပ်ပိုးချင်ပါတယ်, ဒီအမြန်ရထားတွေပေါ်မှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထွက်ပြေးသွားတတ်တယ်. ဖြည့်စွက်ကာ, ရထားအားလုံးမှာရေချိုးခန်းခန်းမပါဘူး, ဒါကြောင့်ကိုယ့်အမှု၌စိုစွတ်သောသုတ်ထုပ်ပိုး, လတ်ဆတ်တဲ့နေဖို့, ခေါင်းလျှော်ရည်ပုလင်းနဲ့ဆပ်ပြာခရီးသွားတာပေါ့.
အလွှာများ ၀ တ်ဆင်ခြင်းသည်ရထားခရီးသွားခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးအကြံဖြစ်သည်, သင်ရထားပေါ်တွင် AC ကိုအလယ်အလတ်မပေးနိုငျအဖြစ်. လည်း, သင်သည်သင်၏အခန်းမျှဝေလျှင်, သင်တစ် ဦး သတ်မှတ်ထားသောပြောင်းလဲနေတဲ့အာကာသလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, အလွှာများတပ်ဆင်ခြင်းသည်သင်အားလပ်ချိန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားခြင်းကိုဆိုလိုသည်, အိပ်ပါ အိပ်ပျော်နေသောရထား, နှင့်မည်သည့်ခရီးသည်, ကျားသို့မဟုတ်မ, မင်းနဲ့အတူရထားအခန်းကိုဝေမျှ.
7. Pack ကိုအလင်း
ဝတ်ဆင်သောအလွှာများသည်တရုတ်နိုင်ငံသို့ခရီးသွားခြင်းကိုရထားဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးသည်. တရုတ်နိုင်ငံရှိရထားများတွင်ခရီးဆောင်အိတ်များကိုကန့်သတ်ထားသည် 20 ခရီးသည်တစ် ဦး လျှင်ကီလိုဂရမ်. on-board စစ်ဆေးမှုများမရှိသလောက်ရှိနေစဉ်, တရုတ်နိုင်ငံရှိရထားများပေါ်ရှိခရီးဆောင်အိတ်များမှာအကန့်အသတ်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သင်အလင်းထုပ်ပိုးချင်ပါတယ်, သင်၏ခရီးဆောင်အိတ်များကိုနီးကပ်စွာထားပါ, သို့မဟုတ်အာကာသခွင့်ပြုလျှင်, ရထားအခန်းထဲမှာ, အစားရထားအတန်းမှာသိုလှောင်မှု၏.
သင်စဉ်အတွင်းခရီးသွားလာနေတယ်ဆိုရင် တရုတ်အားလပ်ရက်, ထို့နောက်လူစည်ကားသောရထားများအတွက်ပြင်ဆင်ပါ. ထိုကွောငျ့, သင့်၏ကျောပိုးအိတ်အားလုံးကိုခရီးဆောင်အိတ်များအကြားမြင်ရလိမ့်မည်.
ရထားလက်မှတ်ကိုရထားဘူတာမှာဝယ်လို့ရပါတယ်, ခရီးသွားအေဂျင်စီများမှ, နှင့်သင်၏ဟိုတယ်မှတဆင့်.
သင်၏ရထားလက်မှတ်ကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်သင်ဝယ်ယူသောအခါသင်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားကိုရလိမ့်မည်, အွန်လိုင်း. Save A Train သည်တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရထားခရီးစဉ်အတွက်အကောင်းဆုံးလက်မှတ်ကိုရှာဖွေရန်ကူညီပေးပါသည်, အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာ. ထို့အပြင်, သင်၏ရထားလက်မှတ်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောသည့်နေရာတွင်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်, ရထားဘူတာမှာတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အတူထက်, ဟော်တယ်, သို့မဟုတ်ခရီးသွားအေဂျင်စီ.
9. Earplugs ယူလာပါ
သငျသညျပထမ ဦး ဆုံးအတန်းအစားခရီးသွားရန်စီစဉ်နေကြသည်မဟုတ်လျှင်, သငျသညျကျိန်းသေနားကြပ်ဆောင်ခဲ့သင့်ပါတယ်. တရုတ်နိုင်ငံရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားများသည်ဒေသခံများအကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များသည်, နှင့်ရိုးရာရထားအလွန်အလုပ်များဖြစ်လိမ့်မယ်. ဒါကြောင့်, မင်းတရုတ်ကိုဖြတ်ပြီးခရီးရှည်ထွက်သွားမယ်ဆိုရင်, ဘေးကင်းလုံခြုံပြီးသွားလာရန်နားကြပ်များကိုထုပ်ပိုးပါ.
10. ရထားနဲ့တရုတ်ကိုဘယ်လိုသွားရမယ်ဆိုတာသိကောင်းစရာ: သင်၏ရထားလက်မှတ်များကိုကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါ
တရုတ်နိုင်ငံရှိမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလက်မှတ်သည်လျင်မြန်စွာကုန်ဆုံးလေ့ရှိသည်. ထိုကွောငျ့, အနည်းဆုံးတစ်လ ကြိုတင်၍ သင့်ရထားလက်မှတ်ဝယ်သင့်သည်. လက်မှတ်တွေအစောပိုင်းအဖြစ်ထွက်ရောင်း 30 ထွက်ခွာသည့်နေ့မတိုင်မီရက်ပေါင်း. ထွက်ခွာသည် လက်မှတ်ကြိုတင်မှာကြားပေးခြင်း နှင့်နောက်ဆုံးမိနစ်မှခရီးစဉ်စီစဉ်သည် ရှောင်ရှားရန်ခရီးသွားအမှား, အထူးသဖြင့်တရုတ်၌.
ရထားခရီးသွားခြင်းသည်သင်၏ကျေးလက်ဒေသနှင့်အဆင်ပြေသောခရီးကိုတရုတ်နိုင်ငံကျေးလက်ဒေသမှစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်, မြို့ကြီးများ, နှင့်အမြင်များ. ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, သင်၏အားလပ်ရက်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့ရထားဖြင့်စီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည်.
သင်၏ဘလော့ဂ်ပို့စ်အား“ ရထားဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံသို့မည်ကဲ့သို့သွားလာရမည့်နည်းလမ်း ၁၀ ချက်” ကိုသင်၏ကွန်ရက်ပေါ်သို့တင်ချင်ပါသလဲ? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-travel-china-train%2F%3Flang%3Dmy ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Chinabytrain ချင်းမိုင် ချင်းပြည်ရေး ချင်းနတ်သမီး ချင်းပြည်နယ် ch